रुकुमबाट चिसो छल्न दाङ झरेका एकसय भेडा अचानक म रेपछि किसान चिन्तित - Himali Patrika
रुकुमबाट चिसो छल्न दाङ झरेका एकसय भेडा अचानक म रेपछि किसान चिन्तित
हिमाली पत्रिका १९ माघ २०७६, 2:12 am
जाडो छल्न रुकुम पूर्वबाट दाङको सैघामा ल्याईएका किसनका भेडा म र्न थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। सयौंको संख्यामा विरामी भएका भेडाको उपचार थालिए पनि म र्ने क्रम रोकिएको छैन् ।
हरेकवर्ष पहाडी जिल्लामा हिउँ पर्ने र अत्यधिक चिसो हुनेभएकाले चिसोबाट बचाउन रोल्पा रुकुम लगाएतका हिमाली जिल्लाबाट दाङ सहित तराइका विभिन्न जिल्लामा भेडा ल्याइने गरिन्छ।
यही माघ ९ गते दाङ जिल्ला घोराही उपमहानगरपालिका सैघामा ल्याईएका भेडाहरु १० गते देखी धमाधम म र्दै गएपछि घोराही उपमहानगरको पशु सेवा शाखा र भेटेनिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रको प्राविधिक टोली उपचार सुरु गरेको हो ।
तर भेडा मर्ने क्रम भने नरोकिएको किसानहरुले बताएका छन् । तिलम पुन, रामकृष्ण पुन र धर्म पुनको २ सय २५ बढी भेडाहरु मरेका छन् । यसैबिच भेडा म र्नु का कारणबारे जाँचका लागि नमूना क्षेत्रिय पशुरोग अन्वेशण प्रयोग शाखा सुर्खेत पठाईने विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डा. बेदबहादुर केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
साथै मरेको भे डाका पोष्टमार्टम गर्दा पाचन प्रणाली र स्वास्वप्रस्वासमा समस्या देखिएको पाईएको छ । डा. केसीका अनुसार फोक्सो र ठूलो आन्द्रामा घाउ भेटिएको छ ।
जीवित भेडाहरुमा संक्रमण फैलिन नदिन एन्टीबायोटिक औषधी चलाईएको समेत विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । तीन जना किसानका जनही ७५ वटाका दरले भेडाहरु म रेपछि चिन्तीत बनेका छन् ।
यसैबिच वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधी सहित प्रहरीको टोली पनि घ टना स्थलमा पुगेर किसनको अवस्था बुझेको छ । घोराही १९ का सदस्य जंग रोकासहित प्रहरीहरु घटनास्थल पुगेर मुचुल्का तयार पारेका छन् । मुलुल्काका आधारमा पीडित किसानलाइ राहतका लागि पहल गरिने सदस्य रोकाले जानकारी दिनुभयो ।